Horohorontany Nandrava Tempoly Tranainy Maherin’ny 200 Tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2016 6:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, عربي, русский, Türkçe, မြန်မာ, Aymara, English
Horohorontany manana maridrefy 6,8 no namely an'i Myanmar tamin'ny 24 Août lasa teo. Sary maneho ny ivony sy ny velaran'ilay horohorontany, nalaina tao amin'ny vohikalan'ny Sampam-pitsirihana Zeolojikan'i Etazonia
Nitatitra ireo tompon'andraikitra tao Myanmar fa olona telo no maty ary Tempoly tranainy sy pagoda 228 farafahakeliny no simba tao Mandalay manontolo taorian'ny horohorontany nanana maridrefy 6,8 namely ny firenena tamin'ny 24 Août lasa teo.
Anisan'ireo fotodrafitrasa simba ireo tempoly miisa 187 vita biriky tao amin'ny renivohitr'i Bagan taloha. Tsipak'ombalahy io ho an'ilay firotsahan’ny firenena mba hanaovana an'i Bagan ho toy ny Lovan'izao Tontolo izao ao amin'ny lisitry ny UNESCO. Anisan'ireo toerana arkeolojika manan-danja ao Azia Atsimo-Atsinanana i Bagan, ary matetika oharina amin'i Angkor Wat any Kambodza sy ny Borobudur ao Indonezia.
Bagan, izay toerana fizahantany malaza ihany koa, dia ahitana ireo pagoda sy tempoly miisa 3.000. Ny taona 1975 no fotoana farany nandravan'ny horohorontany ireo tempoly tao Bagan.
Fahafatesana iray, pagoda tranainy, ravan'ireo hovitrovitry ny horohorontany matanjaka #Myanmar https://t.co/XurCMds8Z0
Tsy tao Myanmar irery ihany no tsapa ny horohorontany fa hatrany amin'ireo firenena manodidina, Bangladesh sy Tailandy, ihany koa.
Efa manadio sahady ireo faharavàna navelan'ny horohorontany i Myanmar. Maro ireo nangataka ny famerenana amin'ny laoniny ireo tempoly rava, saingy ao kosa ireo maniry ny hitahiry ny sasantsasany amin'ireo faharavàna mba hampatsiahivana ireo olona amin'ny tokony hiomanana amin'ny fiatrehana ireo loza.
Ireo vohikala tsy mainkina, mpamoaka vaovao sy ny The Irrawaddy mpiara-miasa amin'ny Global Voices no nanangona ny fiantraikan'ny horohorontany tao Mandalay. Eto ambany ireo sary sasany mampiseho ny faharavàna tamin'ny sasantsasany amin'ireo tempoly malaza tao Bagan any Myanmar.
Tempoly Sulamani niharan'ny faharavàna mavesatra noho ny horohorontany. Sary an'i Zaw Zaw / The Irrawaddy
Sary maneho ny vokatry ny faharavàna nateraky ny horohorontany tao amin'ny tempoly Dhammayangyi. Sary an'i Zaw Zaw / The Irrawaddy
Ireo miaramila manangona ny potik'ilay Tempoly malaza Htilominlo ao Bagan. Sary an'i JPaing / The Irrawadd